दुवै पार्टीमा आन्तरिक अफ्ठ्याराहरू जे भए पनि एमाले-माओवादी मिल्नै पर्ने बाध्यता यस्ता छन् - नमस्ते खबर
दुवै पार्टीमा आन्तरिक अफ्ठ्याराहरू जे भए पनि एमाले-माओवादी मिल्नै पर्ने बाध्यता यस्ता छन्
December 27, 2017 joes_limbu joes_limbu
काठमाडौं १२ पुस– वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्राय सँंगसंगै देखिन्थे । चुनाव प्रचारका लागि एउटै हेलिकप्टरमा चढेर देशका विभिन्न ठाउँमा पुगे । जनतासँग भोट माग्ने क्रममा चुनाव लगत्तै पार्टी एकता गर्ने वाचा गरे ।
मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा वामपन्थी गठबन्धनले भारी बहुमत पाए । चुनाव जितिसकेपछि बधाइ साटासाट गरे । २ पुसमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दूरगामी महत्वका निर्णय नगर्न र सहज सत्ता हस्तान्तरणका लागि आग्रह गरे । पत्रकार सम्मेलनमा ओली र प्रचण्डले वामपन्थी सरकार बन्ने र पार्टी एकताका लागि कुनै समस्या नरहेको बताए ।
३ पुसमा बसेको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैंठकमा धेरै नेताहरुले नयाँ सरकार गठन अगावै पार्टी एकता गर्नुपर्ने आवाज उठाए । संयोग या अन्य केही कारणले त्यसयता प्रचण्ड र ओलीबीच औपचारिक भेटवार्ता भएको थिएन । बीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले ७ पुसमा आयोजना गरेको पाँच दलका नेताहरुको बैठकमा भेट भएको थियो ।
अनेक आशंकाबीच प्रचण्ड र ओलीबीच बुधवार लामो कुराकानी भयो । यसबीचमा एमालेले संघीय समाजवादी फोरम लगायत साना दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्न लाग्यो भनेर केही हल्ला फैलिए । स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शनिवार नवलपरासीमा पार्टी कार्यकर्तासँगको भेटमा एमालेले फोरमसँग मिलेर सरकार बनाउन लागेको बताएपछि आशंका बढेका थिए ।
यसबीचमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पाँच बर्ष प्रधामनन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका समाचार बाहिर आए । यो कुराले एमालेलाई झस्काइदियो । आर्कोतर्फ चुनाव अघि भएको सहमति अनुसार आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति विपरित एमाले नेताहरुका अभिव्यक्तिले माओवादीलाई झस्काइदियो ।
एकता दुबैका लागि बाध्यता !
एमाले माओवादी वामपन्थी एकता भएको दिनदेखि नै गठबन्धन भाड्न अनेक प्रयत्न नभएका होइनन् । कतिपयले यो गठबन्धन चुनावसम्मका लागि मात्र भनेर टिप्पणी गरेका थिए । जतिसुकै चलखेल भएपनि केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउनु बाहेक माओवादीका लागि दोस्रो विकल्प छैन ।
भर्खरै सम्पन्न चुनावको जनादेश पनि त्यही हो, एमाले माओवादी संयुक्त सरकार । एमालेलाई पनि माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकार बनाउनु जस्तो भरपर्दो अरु हुन सक्दैन । फोरम र साना दललाई लिएर प्राबिधिक रुपले सरकार बनाएपनि त्यो सरकार बलियो हुँदैन, जति माओवादी र मधेश केन्द्रित दलको विश्वासमा सरकार बनाउदा हुन्छ ।
प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेको एमालेले समानुपातिकमा ४१ सीट पाउने सम्भावना छ । २ सय ७५ सांसद रहने प्रतिनिधि सभामा बहुमत ९१३८ सांसद० पुराउन एमालेलाई १७ सीटको आबस्यकता हुन्छ । फोरमले प्रत्यक्षमा पाएको १० र समानुपातिकको ६ समेत गर्दा एमालेलाई बहुमत पुराउन थप एक सीटको आबस्यकता हुन्छ ।
एक सीट पुराउन एमालेलाई समस्या छैन, आफैले समर्थन गरेका राप्रपा या राजमोका सांसदले समर्थन गर्न सक्छन् । तर यो प्राविधिक या अंकगणितको रुपमा मात्र बहुमत प्राप्त सरकार हुन्छ, राजनीतिक रुपमा बहुमत पुराउन माओवादीसँग मिल्नै पर्ने एमालेको बाध्यता छ ।
‘मत फ्यूजन’ को दबाब
चुनावी तालमेल गरेर एउटै चुनावी घोषणा पत्र लिएर जनतामा गएका एमाले–माओवादीलाई राजनीतिक स्थायित्वका लागि बहुमत दिएका हुन् । एमालेले जितेको ८० सीटमा माओवादीको हिस्सा छ र माओवादीले जितेको ३६ सिटमा एमालेको ठूलो भूमिका छ । एमाले र माओवादी एक्लैको योगदान भनेको उनीहरुले समानुपातिकमा पाएको भोट मात्र हो ।
‘एमाले माओवदीले पाएको मत दुई पार्टीको फ्युजन हो’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले महासविच इश्वर पोखरेलाई बधाइ दिन आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए,‘दुवै दलले अहमता देखाउनु हुँदैन ।’
सी आगमनको सम्भावना
कसैले स्वीकार गरेपनि नगरेपनि वामपन्थी गठबन्धन निर्माणमा चीनको सद्भाव रहेको थियो । चीन नेपालमा राजनीतिक स्थिरता चाहान्छ, चाहे भारतले पनि स्थिरता चाहेको किन नभनोस । नेपालमा पाँच बर्षसम्म चल्ने वामपन्थी सरकार बनेमा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने चीनको चाहना छ । नेपालमा वामपन्थीको सरकार गठन हुने निश्चित भएपनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गर्ने तरतम्य शुरु भइसकेको छ ।
गतबर्ष पनि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने चर्चा थियो । तर नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि उनी नेपाल आउने वातावरण बनेन । भविष्यमा त्यस्तो घटना नदोहोरियोस भन्नेमा माओवादी नेताहरु सतर्क छन् ।
एमालेसंग मिलेर चुनावमा जितेपछि कांग्रेससंग मिलेर सरकार बनाउनु माओवादीका लागि राजनीतिक रुपमा घातक हुनसक्छ । राजनीतिक स्थिरतका लागि भनेर जनतासंग भोट मागेका माओवादीहरुका लागि भोलिको दिनमा जनतासँग जाने बाटो बन्द हुनेछ । २ पुसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बनिसकेकोले फेरि बन्न लोभ नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एकताको घोषणा गर्दा हौसिएका दुई पार्टीका कार्यकर्ताको मनमा अहिले चिसो पसेको छ । कतै पार्टी एकता नहुने त होइन ?
एमालेले प्रचण्ड र माओवादी कार्यकर्ताले ओलीमाथि अपनत्व महशुस गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा दुई पार्टीबीच एकता नहुँदा सवैभन्दा ठूलो समस्या तल्लो तहमा देखिने छ । एक अर्का विरुद्ध कार्यकर्ताहरु आक्रामक हुन सक्छन् भने चुनावमा सघाएकाहरुको व्यवहारका कारण अफ्टेरो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । जसको परिणाम दलहरुले आगामी निर्वाचनमा वेहोर्ने नै छन् । जसको डर एमालेलाई भन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमा धेरै देखिएको छ । तर एकता नगरे माअोवादी नेपाली कांग्रेससँग नजिकेने र पाँच वर्ष सरकारबाट बाहिर पर्ने अवस्था अाउने डर एमाले नेतृत्वमा छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा नेपाली कांग्रेसँग तालमेल गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेसँग आएको माओवादीलाई कांग्रेसको नेतृत्वले स्विकार गरेपनि कार्यकर्तामाझ उसको छवी धुमिल हुनेछ । जसको घाटा माओवादीले बेहोर्ने छ ।
प्रत्यक्षमा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेभन्दा १३ सीट बढी जितेको माओवादी केन्द्रले समानुपातिकमा निकै कम मत ल्याएको छ जुन उसको वास्तविक मत हो । पहिलो बनेको नेकपा एमालेले समानुपातिकमा ३१ लाख ७३ हजार मत पाउँदा माओवादी केन्द्रले १३ लाख मात्र मत पाउन सक्यो । जसका कारण माओवादी अध्यक्ष रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । र, ठूलो वाम पार्टीको नेतृत्व गर्ने आफ्नो महत्वकांक्षा नेकपा एमालेसँग मिलेपछि प्राप्त हुनेमा ढुक्क छन् । जसका कारण उनी नेकपा एमालेसँगको एकिकरणलाई छोरेर अन्यत्र लागिहाल्ने अवस्था छैन ।
पार्टी एकता कि सरकार ?
एमाले र माओवादीबीच अहिलेको बहस भनेको सरकार गठन पहिले कि पार्टी एकता भन्नेमा केन्द्रीत छ । सरकार गठन सहज भएपनि पार्टी एकता त्यति सहज देखिएको छैन् । गोपाल किराती र आहुती बाहेक माओवादीका कुनैपनि नेताले एमालेसँगको पार्टी एकतालाई अस्वीकार गरेका छ्रैनन् ।
एमालेसंग चुनावी तालमेल नभएको भए चुनावमा हालत खराव हुने बुझेका नेताहरु एकताका लागि तयार छन् । केन्द्रका नेता भन्दा एक कदम अगाडि जिल्ला तहका नेता एकताका लागि आतुर देखिएका छन् । माओवादीको भातृ संगठन वाइसीएलका नेताहरु त छिटो पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर नेताहरुकोमा घरदैलो गरेका थिए ।
यति हुँदा हुँदैपनि पार्टी एकता त्यति सहज भने छैन् । पार्टी एकता कहिले हुन्छ भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा माओवादीका एक नेताले ठट्टा गरे, ‘त्यो त देउवालाई सात पटक प्रधामनन्त्री हुने भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषीलाई थाहा होला ।’
नेकपा एमालेका पोलिटव्युरो सदस्य भानुभक्त ढकाल सरकार गठन लगत्तै पार्टी एकता हुने दावी गर्छन् । ‘हामीले चुनावमा जाँदा वामपन्थी गठबन्धनलाई सुविधानजनक बहुमत दिनुस हामीले समृद्धि दिन्छौ भनेका थियौ । जनताले हामीलाई बहुमत दिए’ एमाले नेता ढकाल भन्छन्, ‘हामी एउटै चुनावी घोषणापत्र लिएर जनतामा गइसकेका पार्टी एकता हुँदैन भन्ने आशंका किन र?’
गोपाल किराँतीले प्रचण्डलाई चुनौति दीदै भने म एमाले जादैजान्न आठौ महाधिवेशन गरेर पार्टी पुनर्गठन गर्छु।
चिनिया लगानि आउन थाल्यो लगानी बोर्ड र चिनियाँ सिमेन्ट कम्पनीबीच १५ अर्बको सम्झौता